रमेश प्रसाईका फ्यानहरुका लागि अहिलेसम्मकै खुशीको खबर,नन्दाको आँखा ठिख हुने ! – live 60media
रमेश प्रसाईका फ्यानहरुका लागि अहिलेसम्मकै खुशीको खबर,नन्दाको आँखा ठिख हुने !
नेपालमा नभएर विदेश मा हुने भयो भने पनि म जान सक्दिन किनकी मेरो त्यँहा सम्म जाने हैसियत छिन । भरिसक नेपालमै भैदिएको भए सहज हुन्थ्यो; म भन्दा पनि मेरा यी बालबच्चा लाई हुर्काउन अझ बढी सहज हुन्थ्यो भन्ने उनको उनको भनाई थियो । अब हेर्नुस् अन्य अरु के के भनिन त आफ्नो आँखाको उपचारको बारेमा ।
← यात्रुबाहक बस ट्रकसँग ठो’क्किँ’दा ३७ जनाले ज्या’न गुमाए, १९ जनाको अबस्था गम्भीर
पाँच दिनदेखि लागेको भिषण डढेलो पाथीभरा मन्दिरमा पुग्यो तर मन्दिर केहि भएन →